Somaliland: Siyaasi Muniir Oo Weedho Dhaxal Gal Ah U Soo Jeediyey Xukuumadda Muuse Biixi - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Siyaasi Muniir Oo Weedho Dhaxal Gal Ah U Soo Jeediyey Xukuumadda...
Siyaasi Muniir Axmed Cigaal Oo Ka Mid aha Kaadarinti Xisbiga Rajada Shacabka Somaliland Ee Dhacay Ee Waddani ahana Kaaliyah Warbaahinta Murrashax Cabdiraxmaan Cirro aya waxa U Weedho U Soo Diray Kaadariinta Xukuumadda Muuse Biixi
Maqaal Kooban oo tallo iyo nasteex u ah Madaxweyne Muuse Biixi.
Halka manta dadkeeni iyo dalkeeni maraayo mid inoo wada muuqda weeye, kala qeybsanaanta kala fogaanshaha iyo isu dheelitir la’aanta jirta xagga cadaaladda.
Qabyaaladdu waa sabab ka mid ah dhibaatooyinka dalka Somaliland ka jira waxayna si xooggan u sii quwaysatay qaadashadii axsaabta badan oo ay ahayd in lagaga baxo qabyaalada, waxa sii naaxiyay naxligeeda curashada jeegaanta oo laga yaabo inay dadka qaar maanta guul u arkaan oo ku faraxsan yihiin balse ah halis weyn oo khatar ku ah wada noolaanshaheena waxaana la eegaya siduu isna u adeegsado amma u wajaho qabyaalada Dalka ka jirta iyo sii jiritaanka Jeegaanta.
Xalka Qabyaaladda ayaan u arkaa in ay tahay dadka oo loo sameeyo wacyigalin iyo in la kordhiyo xidhiidhka beelaha deriska ah ay leeyihiin kuwa Gobol kasta oo Somaliland ku wada nool si loo hakiyo cadho kasta oo kala qaybsanaantii doorashada ka dhalatay dabka ku sii shidi karta geesta kale waxa muhiim u ah wax ka qabashada qabyaalada soo noolaynta guddiyadii horumarinta gobolada oo doorweyn ka qaadan jirtay in ummadda Gobol kasta wada degani is dhexgalaan waxna wada qabsadaan. Tusaale guddidii horumarinta Togdheer iyo kuwa la midka ah in la soo celiyo.
Doorashadii Muuse Biixi Cabdi waxa haboon in la bogaadiyo loona duceeyo maanta mucaarid iyo Muxaafidba waayo culaysku maanta xaggiisa ayuu saaranyahay, waxaase haboon inuu ogaado dareenka dhabta ah ee dadku ku suganyihiin oo aanu la dabaal degin Xisbi gaara amma in gaara amma reero gaara, waxaana muhiim ah inuu Madaxweynuhu akhristo oo qaato talooyinka maqaalkani kamidka yahay .
Mud. Madaxweyne doorashadii aynu galnay marka hore iyadoo dalkeenu faqiir yahay, waxaad hadana dhaxashay waddan shaqo la’aantu ku badantahay, waddan qabyaaladu mooska soo jabsatay, waddan lays tuhmay sidii caano jiilaal canba-can dareemayo calaaliskiisa. Waxa hafeef reebay sidii doorashada loo galay oo awoodu dhinac wada martay, dhinaca kalena lagu wada ciiray. Intaas oo dhan oo aad dhaxashay marka hore soo dhis Xukuumad tiro yar oo waliba tayo leh. Wajiyo cusub oo ummaddu ka iibsatana ku lamaanyihiin. Waxaan kaloo kugula talin laha qodobo kooban balse muhiim u ah wanaaga xukuumadada.
1. Dhismaha xukuumadda cusub, tayada wasiirada iyo milgaha iyo sharafta qofka xilka loo dhiibaayo.
2. La dagaalanka musuq maasuqa, maamulka iyo dhawrista hantida guud iyo qandaraasyada
3. Dhaqaalaha: Wax ka qabashada qiima dhaca SH. Somaliland oo ah qodobka ugu horeeya ee hiilka u ah danyarta.
4. Cadaalad u samaynta shirkadaha iyo Ganacsiga xorta ah ee Somaliland, waa muhiim in aanay ummaddu dareemin naas nuujinta tijaartii Ololaha kugu tageeray.
5. Xisaabxidh la’aanta miisaaniyadihii kala dambeeyay waa in aanay sii socon lana arko la xisaabtan dhaba si dhaqaalaha yar ee dalka soo gala uu macno u sameeyo .
6. Tayeenta waxbarshada dalka oo aad muhiimad gaara saarto.
7. Cafiimaadka hooyada iyo dhalaanka.
8. Shaqo abuurka dhalinyardda dalka oo ah rajada ugu weyn ee barbaartu doorasho kasta naawilaan walina si cilmiyana aan u hirgalin.
9. Maxkamadaha, caddaaladda, jeelasha iyo rugaha booliska oo ah halka qalooca cadaaladeed ka bilaabmo waliba wax weyn ka badal hoggaanka ciidanka Booliska xadhigii labada jeer lay xidhay wax badan ayaan ku ogaaday oo aanan rabin inaan iyaga talada kugu daro .
10, Warbaahinta Dawladda iyo hanaanka ay hadda u shaqayso oo aan dawr ku lahayn jihayntii Wacyigalinta ee ay u xilsaarnayd inaad isbadal ku samayso.
11. Dhismaha waddooyinka halbawlaha u ah isku xidhka dalka ay ugu horeyso dhammaystirka wadadii Ceerigaabo iyo dayactirka wadada Berbra Hargaysa oo hadda baaba ku dhaw .
12. Wax ka qabashada muranada masuuliyiinta oo xukuumaddii ka horaysay hadheeyay taas oo ah qodob minqiyaas u noqon doona kala danbaynta Xukuumadada.
13. Diiwaangelin buuxda oo dhamaan muwaadiniinta loo sameeyo
14. Sinnaanta: Daryeelka naafada iyo xuquuqda dadka liita.
15. Adkaynta nabadgelyada gudaha iyo xuduudaha, iyo habaynta ciidamada Booliiska Militariga ,Nabadsgida iyo kuwa Qalabka sida.
16. Aqoonsiga, iskaashiga waddamada caalamka iyo kuwa shirkadaha iyo Ganacsiga dalka loo xidhay oo u baahan dib u qiimayn dhammaystiran oo dilaalnimo ka madhantahay.
16-Ka qodob ayaan tallo ku soo gudbinayaa Mud. Madaxweyne . Anoo u arka in aanay maanta furnayn in lagugu mucaarido balse ay haboontahay in dhismaha Qaranka ninba itaalkii dhinaca lagu la qabto .
Waxaan kaga baxaya tuduc kamid ah maansadii hadraawi ee Badbaado.
“Haddii bidixda oo qudha lagu qoro run iyo been, talada Han-buruurto laba baahiyoodba isku beegmi waaye, nin bursaday hadduu jiro nin wax beelay baa nool, nin badsaday hadduu jiro ka la boobayba qaday.
Xildhibaan Nacnac Oo Maamul Goboleedka Puntland Digniin Culus U Diray
Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo Oo Wakiilada Ku Soo Celiyey Xeerarka Booliiska Iyo Duulista Iyo Qodobbada Uu Dalbaday In Wax Laga Beddelo
Laba Garamay Iyo Laba Gantamay Galadi Kama Dhaxayso Shirkii Burcona Gole Kaga Kac Ayuu Aha.
Somalia: Al Shabaab retake key port town after troops pull out
Qiimaha Uu Timaha Ku Xiirtay Amiir Ka Tirsan Boqortooyada Britain Oo Aad Loo Qaadaa Dhigay !
Somaliland: “Wakiilka Somaliland Ee Dalka Jabuuti Waxa Uu Qaataa Bishii 26,000 Oo Dollar, Waa Wakiilka Lacagta Ugu Badan…” Xoghaya Warfaafinta Xisbiga UCID